बसन्त थापा मगर, अमेरिका
छ महिना अगाडी पार्टीका नेताहरूले भनेका थिए, ‘सरकारले राम्रो काम गरेको छ र अझ परिणाम आउदैछ । ’ यो बीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी भए । उपचार सफल भयो । कम्तिमा रोग अनुसार केहि महिना आराम जरूरी अनिवार्य थियो । कोरोना माहामारी नेपाल लगायत संसारभर आयो । राज्य, उद्योग, घर, धर्म, शिक्षा, बाटो, आवत–जावत सबै ठप्प भयो । यहि बिचमा भारतले नेपालको जमिन समेटेर नया नक्शा जारी गर्यो । नेपालले पनि नक्शामा छुटेको र भारतले जवर्जस्ती अतिक्रमण गरिबसेको जमिन समेटेर नयाँ नक्शा जारी गर्यो ।
पुराना सन्धी लगायत कयौ बिषय समाधान गर्न भनि दुइ देशका बिज्ञहरूको सुझाब संकलन गर्न संयुक्त रुपमा लगाएपनि भारत यसमा सकारात्मक देखिएन । भारतले बिज्ञहरूको सुझाब लिन मानेन । यसको अर्थ भारत समस्या समाधान गर्न, नेपालको जमिन छोड्न र सिमाना मिच्ने काम रोक्न चाहदैन भन्ने जनाउ दिदै थियो । झन नक्शा जारी र सडक उद्घघाटन गरेर भारत नेपाललाइ घात गर्न चाहन्छ भन्ने प्रमाणित गरिरहेको थियो । भारतको यस्तो प्रवृत्तिदेखि ओली सरकार चुप रहेर बस्न सकेन । नेपाली जनता, दल र आफ्नै पार्टीको सुझाब दबाव र भारतको व्यवहारले निराश बनेका ओली समेत आक्रोस देखाउन बाध्य हुनुपर्याे । भारत ओलीसँग वार्ता गर्न नचाहने, सरकार ढाल्ने हल्ला फैलाउने र ओली सरकारलाइ काम गर्न सहज वातावरण रहन नदिन उद्धत रहदै गयो । महामारी र भारतीय अतिवादी व्यवहारबीच आफ्नै पार्टीका नेताहरू सरकारले काम गरेन भन्दै पत्रिका, टिभी र समुहगत बैठकतिर देखिन थाले ।
माहामारी र भारतीय व्यवहारले कामका राम्रो परिणाम आउन नसकेको स्थितिमा आफ्नै पार्टीका नेताहरू सरकारको बिरोधमा उत्रन थालेपछि ओलीसरकार हटाउन भारत लागी परिरहेको छ र यसमा आफ्नै दलका केहि नेताहरू प्रयोग भैरहेका छन् भनेर आक्रोश पोख्दा परिणाम र वातावरण झन गलत स्थितीतर्फ पुग्यो ।
ओलीले कुनै नेताको नाम उच्चारण नगरे पनि केहि नेता भन्नासाथ मलाइ नै भनेको भनेर प्रचन्ड आक्रोशित बन्दै ‘भारतले होइन, मैले राजिनामा मागेको’ भन्दै दुबै पदबाट ओलीको राजीनामा माग्न पुगे । यही मौका छोपी माधव र झलनाथले प्रचन्डलाइ उचाल्न थाले । भीम रावल, रघु, मातृका, अष्टलक्ष्मीहरु व्यक्तिगत असन्तुष्टि र सत्रुता साध्न उद्धत भए । न ओलीलाइ न प्रचन्डलाइ सम्झाउने र थमथमाउने नेता, कार्यकर्ता देखिए । उल्टै पक्ष–विपक्ष लिएर वाक युद्ध, लेख युद्ध, कमेन्ट युद्धमा नेता कार्यकर्ताहरू उत्रिए ।
बिगत केहि महिनामा सरकारले त्यस्तो के गलत काम गरेको थियो, जुन बेला माहामारी फैलंदै थियो र प्रधानमन्त्री बिरामी भै अस्पताल र आवासमा सुतिरहेका थिए । यस बेला कसरी र कस्को नेतृत्व र भुमिकाबाट नेकपा बन्यो र झन्डै दुइ तिहाइ बहुमतमा नेकपा पुग्यो यो सबै कुरा बिर्सिइयो । सहमति गर्ने, तोड्ने, पुन नयाँ सहमति गर्ने कामहरू प्रचन्ड र ओलीबीच भए । सरकार ओलीले र पार्टी प्रचन्डले चलाउने भन्दा पनि न सरकारलाइ चल्न दिइयो न पार्टी चलाइयो ।
बोल्नै नपर्ने बिषयमा बोल्दा स्थिती बिग्रिन्छ भन्ने सुझबुझ ओलीमा नहुनु , आक्रोस माथी आक्रोस पोख्दा दुर्घटना घट्न पुग्छ भन्नेमा प्रचन्डको दुरदर्शिता नदेखिनु, स्थिती सम्हाल्ने भन्दा बिगार्ने , उचाल्ने र शत्रुता साध्ने काममा माधव झलनाथ देखिनु, युवा र दोस्रो तहका नेताहरू गुट र मुख्य नेता रिसाउलान र अवसर र स्थान गुम्लान भनेर चुप रहनु वा उचाल्ने र पछार्ने तहमा केहि देखिनु र भारतको कपटपुर्ण व्यवहार थोपरीनु नेकपाको बर्तमान संकटका मुख्य कारणहरु हुन ।
कुरा यहीबाट बिग्रिएको थियो । सरकार चलाउनेले आफु सफल हुन र परिणाम प्राप्त गर्न आफ्नै टिम स्वभाविक बनाउछन । पार्टी चलाउन आफ्नै टिम स्वभाविक बनाउछन् तर सरकारमा आफ्नो अस्तित्व देखाउन र बनाउन खोज्दा प्रचन्ड, माधव र ओलीहरू बिच असमझदारी बढदै गए । यता पार्टीमा प्रचन्ड र माधवहरूका आधिपत्य बन्ला भनेर पार्टीका गरिनु पर्ने काम र बाँकी एकिकरणतिर ध्यान र साथ सायद ओलीहरूबाट प्रचन्ड माधवहरूलाइ पनि दिनुपर्ने जति दिइएन । सरकारतिर ओली बलियो र लोकप्रिय बन्दै गए पुनः अर्को चुनाबपछि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न खोज्ने हुन कि भन्ने डर र आशंकामा माधव प्रचन्डहरू पिरोलिदै गए कि ? भन्ने पनि आशंका देखियो ।
यता ओली पार्टी र प्रमुख नेताहरूसँग सहमति र सल्लाह नगरी आ–आफ्ना मानिस राख्दै र सरकार चलाउदै गए भन्ने आरोप देखिन थाले । सायद बिरामीको कारण सत्ता हाम्रै हातमा आउने नै हो भन्ने आशा र निशाना ओलीको स्वास्थ्य र जनताको पाच वर्षें स्थिर सरकार भन्ने चाहानाले उल्टाइ दियो कि ? आफ्ना सबै निजी सम्पति ट्रस्टको नाममा दिदा माधव र प्रचन्डहरूलाइ पनि नैतिक दबाब पर्न गयो कि ? सायद समाजवादमा निजी जमिन र सम्पति नेताहरूको हुदैन कि ? संविधान र ओलीको कारण जमिन र सम्पति राज्यलाइ दिन दबाब आइ पर्यो कि ? आक्रोस र शंकाले दुबै खेमा पिरोलिएको टिप्पणी आए । बोल्नै नपर्ने बिषयमा बोल्दा स्थिती बिग्रिन्छ भन्ने सुझबुझ ओलीमा नहुनु , आक्रोस माथी आक्रोस पोख्दा दुर्घटना घट्न पुग्छ भन्नेमा प्रचन्डको दुरदर्शिता नदेखिनु, स्थिती सम्हाल्ने भन्दा बिगार्ने , उचाल्ने र शत्रुता साध्ने काममा माधव झलनाथ देखिनु, युवा र दोस्रो तहका नेताहरू गुट र मुख्य नेता रिसाउलान र अवसर र स्थान गुम्लान भनेर चुप रहनु वा उचाल्ने र पछार्ने तहमा केहि देखिनु र भारतको कपटपुर्ण व्यवहार थोपरीनु नेकपाको बर्तमान संकटका मुख्य कारणहरु हुन । यसबाट पार पाउन अब दुबै पक्षले त्याग र संयम गर्न सक्नु पर्छ । त्यो भनेको प्रचन्डलाइ एकल पार्टी अध्यक्ष सहित पार्टी मात्र चलाउन दिने र सरकारमा ओलीलाइ कुनै दबाब र हस्तक्षेप नगर्ने । ओलीले पार्टी महाधिवेशन र हुने नया पदाधिकारी प्रति कुनै चासो र भुमिका नखेल्ने । आखिर महाधिवेशन र आमचुनाब पछि प्रचन्ड नै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुने होे भने किन ओली चार पाँच महिनाको लागी अध्यक्ष भै रहने ? प्रचन्डलाइ एकल अध्यक्ष भइ पार्टीको काम गर्न दिने र ओलीले पाच वर्ष सरकार चलाउने गर्दा नै राम्रो हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री भैसकेका कोही पनि राष्ट्रपति नबनाइने, प्रचन्ड यसपछिको पाच वर्ष मात्र प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुने र क्रमश युवा र दोस्रो तहमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गरि दिने, सबै बुढा नेताहरूलाइ सम्मानजनक स्थान दिदै नेतृत्वबाट बिदाइ गर्ने, पार्टी र सरकार पार्टीको घोषणापत्र र संविधानको उदेश्य सहित लक्ष्य र काममा लाग्ने, सबै राजनैतिक नियुक्तिहरूमा सहमतिका साथ योग्य दक्ष विज्ञहरू राख्दै जाने, आफन्त र परिवार सदस्यलाइ नियुक्तिमा पुर्णत बन्देज लगाउने, जनताका चाहाना र आशाहरू प्रति संम्वेदनशिल र इमान्दार हुदै काम गर्न सकियो भने नेकपा फेरी बौरीहाल्न सक्छ ।
सबै छिमेकी र विदेशी मित्र राष्ट्र र सरकारहरू संग पार्टी, सरकार र प्रतिपक्षी दलहरू सहित देश र राष्टको हितका काममा विवाद र अबरोध बिहिन हुने गरी परियोजना र आवधिक आयोजनाका काम गर्दै र सम्पन्न बनाउदै जानुको बिकल्प छैन । आखिर केहि महिनापछि अध्यक्ष ओलीले छोड्ने र प्रचन्ड एकल अध्यक्ष बन्ने नै हो भने अहिले नै ओलीले प्रचन्डलाइ एकल अध्यक्ष बनाउने काम गरौ । अर्को चुनाब पछि प्रचन्ड नै प्रधानमन्त्री हुने हो भने हाललाइ ओलीलाइ नै प्रचन्डले पाच वर्ष प्रधानमन्त्री हुन सहयोग गरौ । सायद यसो गरिए सरकार र पार्टी दुबै जोगिन सक्छ ।